EVE (2022) – Gold Channel Movies
Episode6Jun. 16, 2022
Episode7Jun. 22, 2022
Episode 8 Jun. 23, 2022
ပုံပြင်ဆရာမလေးအနေနဲ့ ပရိသတ်ကို ဖမ်းစားခဲ့ပြီး အခုတစ်ခါမှာတော့ ရဲရင့်တဲ့ဘုရင်မတစ်ပါးလိုအရှိန်အဝါတွေနဲ့ပြန်လာမယ့် Soe Yea-Ji ရဲ့ Eve…
တောက်ပတယ်၊ ခမ်းနားတယ်၊ အရှိန်အဝါကြီးပါတယ်ဆိုတဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းကို ခလောက်ဆန်စေမယ့် မိန်းကလေးတစ်ဦးရဲ့ Eve ကို GC ချစ်သူတိုအတွက် တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါပြီနော်။
နာမည်ကြီးမိသားစုရဲ့သားထံမှာ ဝမ် ၂ ထရီလီယံ ကို ကွာရှင်းစရိတ်အဖြစ်တောင်းခံလာပါတဲ့ Lee La-El(Soe Yea-Ji)….။ ဒီကွာရှင်းမှုဟာ ၁၃ နှစ်ကြာ အကွက်ချခဲ့တဲ့ လက်စားချေမှုဖြစ်ပြီး ဖန်တီးသူက La-El လိုခေါ်ပါတဲ့ မိန်းမငယ်။ ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့သေဆုံးမှုနောက်ကွယ်က အာဏာရှိမိသားစုတွေရဲ့ဘဝကို ကပြောင်းကပြန်ဖြစ်စေလိုတဲ့ဆန္ဒနဲ့ စတင်ခဲ့တဲ့လက်စားချေမှုခရီးရှည်။
လက်စားချေမှုကတော့ စတင်ခဲ့ပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ အောင်မြင်ဖိုအတွက်ကတော့ La-El တစ်ယောက် ခင်ပွန်းဖြစ်သူ Kang Yoon-Gyeomရဲ့နောက်ကွယ်က LY Group ကြီးတစ်ခုလုံးကို ရင်ဆိုင်ဖို တရားခွင်မှာ ဘယ်လိုတိုက်ခိုက်သွားမလဲ။ အများသူငှာရဲ့အာရုံစိုက်မှုအလယ်မှာ သူငယ်ချင်း Seo Eun-Pyeong ရဲ့အကူအညီနဲ့ ဘယ်လိုတောက်ပမလဲ ဆိုတာတွေကို ကြည့်ရှုခံစားကြရမှာပါ။
၁၃ နှစ်တာကာလကို ကျော်ဖြတ်ခဲ့ရတဲ့ နာကျည်းမှုအပေါ်အခြေတည်ထားတဲ့လက်စားချေမှုက အောင်မြင်မှာလား။ La-El လိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်ဆီသွားတဲ့ခရီးလမ်းက ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေမှာလဲ။ လှပတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ဖွက်ထားတဲ့လက်သည်းတွေနဲ့ အင်အားကြီးမိသားစုကို ဘယ်လိုတစ်စစီ ဖျက်ဆီးပစ်မှာလဲ။ လက်စားချေမှုကို ပြီးမြောက်အောင်လုပ်နိုင်မလား..လက်စားချေမှုကပဲ ဒီအရိုင်းဆန်တဲ့မိန်းမငယ်လေးကို ဝါးမျိုသွားမလားဆိုတာကို အပတ်စဥ် ကြာသာပတေး သောကြာတိုင်း GC Drama မှာ စောင့်မျှော်အားပေးဖို ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။
Translated by Elsa, Phyo, Lynn & June